प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई फेरि चुनावी सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न प्रस्ताव राखेका छन्।
नेकपाको विवाद उत्कर्षतिर पुगेदेखि नै वामदेवलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीसहित अनेक प्रस्ताव गर्दै आएका ओलीले अहिले फेरि नयाँ प्रस्ताव राखेर आफ्नो पक्षतिर तान्न खोजेका हुन्।
यही बेला ओलीले आइतबार सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर गौतमलाई वैशाखमै चुनाव हुने भन्दै गृहमन्त्री बन्न आग्रह गरेका हुन्।
गौतमनिकट एक नेताका अनुसार भेटमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
चुनाव गराउँछु भन्दै हिंडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गौतमको एउटा प्रश्न थियो– असार ५ गतेभित्र निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ?
जवाफमा ओलीले वैशाखमा जसरी पनि चुनाव हुने दाबी गरे। र, थपे– कुनै अन्यौल नराखी चुनावी सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुस्।
आइतबारको भेटमा ओली र गौतमबीच चुनाव र पार्टीको विषयमा डेढ घण्टा छलफल भएको थियो।
‘पार्टी एकता अभियानको क्रममा गौतमले प्रचण्ड र ओली दुवैसँग संवाद जारी राख्नुभएको छ,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने।
गौतमले यसबीचमा प्रचण्ड–नेपालतर्फका घनश्याम भुसाललगायत केही नेताहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन्।
ओलीसँग भेट्नुअघि गौतमले शनिबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए। र, सोधका थिए– चुनाव भयो भने कसरी जानुहुन्छ?
‘संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसपछि पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना बढ्छ’, गौतमलाई प्रचण्डको जवाफ उधृत गर्दै ती नेताले भने।
गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले भने ओलीको तर्फबाट गृहसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पहिले पनि आइसकेको बताए।
यो समाचार हामीले नेपाल खबरबाट लिएका हौ ।